भीम रावल भन्छन् : सांसद पद गए जाओस्, प्रधानमन्त्री ओलीको अराजक कामका सामु झुक्दिनँ । – Yuwa Aawaj
भीम रावल भन्छन् : सांसद पद गए जाओस्, प्रधानमन्त्री ओलीको अराजक कामका सामु झुक्दिनँ ।
चैत्र ९, २०७७ सोमबार 378
काठमाडौं : नेकपा एमालेका प्र’भावशाली नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नझुक्ने दृ’ढता व्यक्त गरेका छन् । उनले आफ्नो सांसद पद गएपनि ओलीसामु नझुक्ने बताए ।
￼नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित के’न्द्रीय कमिटीका नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार अवैध केन्द्रीय कमिटीलाई नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रेडियो एनआरएनमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै ओलीको पार्टीभित्रको पछिल्लो कदमको चर्को आलोचना गरे ।
अनु’शासनहिन, अ’राजक, निरंकु’श र स्वेच्छाचारी काम हो, त्यो कामको वि’रोधमा पार्टीका नवौं महाधिवेशन र जनताको बहुदलिय जनवाद मान्ने, यो देशको स्वा’धिनता, स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्था’यीत्व चाहने सम्पूर्ण सदस्यहरुले त्यस्को अ’वज्ञा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ,
मैले पदको लागि राजनीति आजसम्म गरेको छैन् र आगामी दिनमा पनि गर्दिन, अवैध स्पष्टी’करण म मान्दिँन सांसद पद गए जाओस् ,’ रावलले भने।
ऐन, कानुन र संविधान मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कथित कमिटीको बैठकले कारवाहीका लागि स्प’ष्टिकरण सोध्नु अवैध भएको बताए । उनले भने, ‘सांसद पद गएपनि प्रधानमन्त्री ओलीका गल’त कदमका अगाडी झुक्दिनँ ।’
राजनीतिक नैतिकता नभएको व्यक्तिले बोलाएको अवै’धानिक केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय नमान्ने उनको दा’बी छ ।
नेता रावलले जुन व्यत्तिले पार्टीको वि’धानको ठाडो उ’ल्लंघन गरिरहेको छ उसैले अरुलाई अवैध बैठकबाट का’रवाहीको
निर्णय गर्नु सरासर गलत भएको उल्लेख गरे । गत शनिबार एमालेको के’न्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्प’ष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।रिपोर्टस क्लब बाट
Prevनेता भुसाल भन्छन् : ओलिले जे माग्नुभयो, मैले त्यो कहिल्यै दिन सकिनँ ।
Nextक्या’न्सरको जो’खिम घटाउनुका साथै पाय’ल्सका लागि अचुक औषधि मुला, खानुका १२ फाइदा थाहा पाउनुहोस !
संक्र-मित शिवहरि पौड्यालको स्वास्थ्य वि’ग्रिए पछि आइसियुमा राखेर उपचार सुरु !
एन्जिलाले क्लबको कप्तानी गर्ने !
“कुर्सी र पदको लागी, जनताले, आन्दोलन गरिदिनु पर्ने कस्तो अचम्मको आब्हान हो : सान्ता चौधरी
उद्देश्य नमिलेका तत्वहरू बाहिरिएपछि पार्टी गतिशील भएको छ :- प्रधानमन्त्री ओली